ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ရန်ကုန် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အမှုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားသူ – BBC News မြန်မာ – Vidnews.co.uk
HomeSportsဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ရန်ကုန် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အမှုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားသူ – BBC News မြန်မာ
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ရန်ကုန် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အမှုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားသူ – BBC News မြန်မာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး အရေးယူပေးဖို့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ဦးစည်သူမြင့် ဆိုသူက ဗိုလ်တထောင်မြို့မရဲစခန်းမှာ မေ ၂၉ ရက်က လာရောက်အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အမှုဖွင့်လဲ။ ဒီအမှု ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ။ ရုပ်သံမှာ ကြည့်ပါ။
ရိုက်ကူး – ရွှေအင်းသား ခင်မောင်ဝင်း
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #ရန်ကုန် #ဦးဖြိုးမင်းသိန်း #ဝန်ကြီးချုပ် #ကိုဗစ်၁၉ #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
အမုန်းပွားမှုတွေ မရှိကြတော့ဘူး ဆိုတဲ့ နေဒွေး ၊ သံစဉ်မောင်
Maryam Aurangzeb Refuses Daily Mail Scandal – News Headlines 11:00 AM – 15th July 2019 – BOL News
ဟောင်ကောင်မှာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြ – BBC News မြန်မာ
လွှတ်တော်ထဲက ပွတ်တိုက်မှုတွေနဲ့ သီတင်းပတ် – BBC News မြန်မာ
Sports BBC celular com câmera compartilhamento gratuito News upload vídeo videofone ကစသ မနမ ရနကန အစရ အဖဝငတက အမဖငဖ ဦဖမငသနန
Internet reacts to new Juventus badge – BBC Sport
Football Focus does the Mannequin Challenge – BBC Sport
Terminally ill Sunderland fan Bradley scores against Chelsea – BBC Sport
Reaction to BBC Sport User Comments on Esports
Steve Redgrave's Gold Medal Guide – Olympic Games Rio 2016 – BBC Sport
Big Zuu's amazing freestyle for Liverpool FC's Premier League title run-in | BBC Sport
Celebrity Sledging: Love Island's Marcel v Made In Chelsea's Jamie – BBC Sport
43 thoughts on “ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ရန်ကုန် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အမှုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားသူ – BBC News မြန်မာ”
aungaung aungaung says:
Aung Chan says:
Puitei my says:
ဆွဲပါ တခြားသူလည်းဆွဲတာဘဲ သူတို့အမှားကို တာဝန်ယူလေး ဝီရသူလို ဟိုရှောင်ဒီရှောင်လုပ်မလား သိဘူး ‌ပြည်သူတွေအတုယူစရာဖြစ်အောင် ဒေးဗစ်လားလို ရင်ဆိုင်လေး
Mg Moe says:
Good. No one is above the LAW !!
Star Myanmar says:
NOR POE says:
yin kyi says:
ဆရားမွားေတာ့ အမွာျပင္ တပည့္မွားေတာ့ကြာတာေတာ့မလုပ္နဲ႔ေပါ့ေလ😁
Naing Min Zaw says:
BBC ရော ခုပြောနေတဲ့ကောင်ရော……ပါးရိုက်လို့ နားပြန်ကိုက်တယ်ဆို ဘာသာတိုင်းကို လေးစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့တွေ ဝင်ပါလာလိမ့်မယ်…မတရားဘူးထင်ရင် ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်…လုပ်တဲ့သူအတွက် သီးသန့်လုပ်….
Linn Thurain says:
အစိုးရရံုးေတြ မွာဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ရံုးထဲမွာ လူေတြ နည္းတာမဟုတ္ဘူး။
Tinmaung Soe says:
KyawKo Ko says:
Mask ကို မတပ်ပဲမေးသိုင်းထားလို့
ZOD HUALNGO says:
Thin thin Thin says:
ku thant9987 says:
Yoeso Lay says:
Tun Aye Naing says:
heinzaw htet says:
Hla Hla Toe says:
က်န္တဲ ့ပါတီေတြဒီတစ္ခါ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္တာကန္ ့ကြက္တာမရွိၾကဘူးလား?
Michael Ngawn says:
(OK) GOOD ☺🤭🤭
Michael Moe says:
ကဲဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ လုိ႔၊ဆရာေဒးဗစ္လားကိစၥတုန္းက ဝင္ၿပီးေရးခ်င္တာေတြေရးတ့ဲဟာေတြ၊မန္႔ခ့ဲၾကအုန္းေလ၊လူဆုိတာအမွားန႔ဲမကင္းပါဘူး၊ဘာသာေရးစုေဝးပြဲဆုိၿပီးေခါင္းစဥ္ႀကီးတပ္ၿပီးဆဲလုိက္ၾကတာ၊ခုေတာ့ ဒါေတြမေတြ႔ၾကပါလား၊မဆဲျကေတာ့ဘူးလား😁
Saint Desilver says:
ချသာချမဆိုလည်းသေမထူးနေမထူးတိုင်းပြည် မှာအရှုပ်တော်ပုံများလေကောင်းလေပဲ့😁😁အိငိငိ😁😁အရှုပ်တော်ပုံအောင်ရမည်😁လာမဲ့ဘေးပြေးရှောင်😁😁သ္ခင်မျိုးဟေ့ဖိနပ်မပါ အဲဟယ်ရေးရင်းနဲ့ဘယ်တွေရောက်😂😂😂😂😂
NELLY SAN says:
That's right . အစုိး ရေတြ ဘယ္ လုိ လုပ္မလဲ ေစာင့္ ျကည့္ျကေသး တာ ေပါ ့. သူမ်ား လုပ္ေတာ ဥပေဒ အရ ေလး ဘာ ေလး နဲ ဒင္တုိ့လုပ္ခ်င္တာျက ရူးခ်င္ေယာင္ေစာင္မေန နဲ့ထမင္း စာ ျပည္သူ ေတြ ခ်ီး စား ေန တာ မဟုတ္ဘူး
ကလောင် သွား says:
ဟောဒီဘက်က ပုဒ်မကြီးတွေ ပုဒ်မလေးတွေ ယူကြအုံးမလားဟေ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပုဒ်မဆိုပိုပိုသာသာအပြောက်ချိန်ပေးမယ် လုပ်ချင်ရာလုပ် ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆို အလေးဇောက်ထိုးပေးမယ် ယူကြအုံးမလားဟေ့
Kê Këę says:
A kar luu says:
ခွေးမသားတွေက ဟာကွက်ကို ချောင်းနေကြတယ် ဟာကွက်မရှိအောင်နေကြပါ ပန်းတိုင်မရောက်ခင် ဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူး
Khin Saw Win says:
နည်းနည်းတော့ ရီးစရာကောင်းတယ် တရားစွဲ့မယ်ဆိုတော့
ခင်ဗျား နာမည်ကြီးချင်လို့မှတ်လား မလိမ်နဲ့နော် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် bbcမှာပါတာပေါ့
အဖေကိုသားက သရားစွဲနေတယ် ဘုရးဘုရား
Rule of Law&Superstition 😁😁
တရားဆွဲ မယ် ဆို တော့ ကြည့် လိုက်တာ ၃ပုဒ်၁၀၀ ပေါ်ပင် ဖြစ်ခြင်တဲ့ လခွမ်းကြီး ပြောတော့ ကျမ်းမာရေး ကာလ တရားဆွဲမယ် လို ကိုယ်တိုင်ကျ ယီမို့ face mask ချွတ်ပြီး သတင်းထောက်ကို စကားပြောတာ လာ ဒါဆို သတင်းထောက်ပါ ရောဂါ ကူးခံရဖွယ်ရှိ တယ် Q 21ရက် ဝင် ခိုင်ပါ BBC တစ်ရုံး လုံး
Konay Arakan says:
N. Win says:
ဒီလိုတရားစွဲတာကောင်းတယ်၊ ဒါမှ ဥပ‌ဒေရဲ့ အားနည်းချက်,အားသာချက်တွေကို လူတွေကကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီး၊ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာလာမှာဖြစ်တယ်။ မဟုတ်လျင် အထက်ကအမိန့်ဆိုတာတွေနဲ့ပဲ သွားနေကြတာ၊ ဥပဒေက ဘယ်နေရာသွားသုံးရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
BBc News မြန်မာ မလေးရှားရောက် မြန်မာ သတင်းတွေလဲ အတင်ပေးပါ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေ အတော်တော်အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ဗျာ ခုလိုချိန်မှာ 😥
win zayar says:
ဒါ​ပေမယ့် ပွဲက ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး
DUCT TAPE SURVIVAL USES PART 1
Zero City Zombie Shelter Survival Gameplay Walkthrough (Android,iOS) – Part 7
Чудеса океана Острова жизни National Geographic 2020 Full HD 1080p
Vin Diesel honours Paul Walker while accepting MTV Generation Award – Hollywood News
1:400 Riverside County International Airport Update (KRCI) #3 + Travel News!